Funny Story | PRO-X Software Solution
တစ်ခါက ရွာတစ်ရွာမှာ မျကိစိအရမ်းမှုံတဲ့ကိုဖိုးသောင်းဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက်ရှိတယ်။သူက သူမျက်စိမှုံတာကို ဝန်မခံဘူး မြင်တယ်ဆိုတာချည်းပဲ။မျက်စိမှုံလို့ အဆင်မပြေတိုင်း ဆင်ခြေဆင်လက်နဲ့ဖုံးကွယ်တတ်တယ်။တစ်နေ့ သူ့အိမ်မီးလောင်တော့ အပေါက်ရှာမတွေ့ဘူး။မျက်စိမှုံရတဲ့ကြားမီးခိုးမွှန်နေသကိုး။ရွာသားတွေက …'' ဗျို့ ကိုဖိုးသောင်း မီးတွေကြီးနေပြီ မြန်မြန်ဆင်းခဲ့ဗျ အပေါက်ရှာမတ...
Visits : 4581
တစ်ခါတုန်းက ဘုရင်ဧကရာဇ်မင်းတရားကြီး နန်းတော်ထဲမှာ တရားအကြောင်း ဆွေးနွေးမေးမြန်တော်မူပါတယ်။ အဲဒီလူတွေထဲမယ်မှ ပေါ်ဦးဆိုတဲ့ လူကလဲပါသေး။ ဒါနဲ့ မင်းကြီးက ပေါ်ဦးကိုမေးသတဲ့။ ပေါ်ဦး.. ငါက နိဗ္ဗာနသစ္ဆိကိရိယာစ- ဟူသောမင်္ဂလာတရားတော်ကို ဘုရားရှင်ဟောတော်မူသောကြောင့် နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြု၍ ဓမ္မာရမ္မဏအာရုံ ထုံတော်မူပါတယ်။ ကာလေန ဓမ္မသာဝနံ-ဟူသော မင်္ဂလာတရားကတစ်...
Visits : 4649
လူတစ်ယောက်ဟာ ကြက်တူရွေးတစ်ကောင်ဝယ်ဖို့ ဆိုင်ထဲဝင်သွားတယ်။ အရောင်းစာရေးမလေးက သူ့ကို လိုက်ပြပေးတယ်။“အဝါရောင်လေးက ဘယ်လောက်လဲ”“ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ ပါရှင့်”ဝယ်သူ နည်းနည်းတွန့်သွားတယ်။ ပြီးတော့ ထပ်မေးလိုက်တယ်။“သူက ဘာလို့ဈေးများနေတာလဲ”“သူက စပယ်ရှယ်မို့လို့ပါ။ စကားတတ်အရမ်းမြန်တယ်ရှင့်”ဝယ်သူက ထပ်မေးတယ်။“ဟို အစိမ်းရောင်လေးကကော”“အဲဒီကောင်လေးက ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ ပါ။ သူက စကား...
Visits : 4346
Visits : 4802
တစ်နေ့တွင် အရောင်းတာဝန်ခံတစ်ဦး သည် ခရီးထွက်ရင်း ကျေးလက်တောလမ်းတစ်နေရာတွင် ကားကို တစ်နာရီမိုင်သုံးဆယ်နှုန်းဖြင့် မောင်းနှင်လာစဉ် ခြေသုံးချောင်းရှိသော ကြက်တစ်ကောင်က သူ့ကားဘေးမှ ဖြတ်ပြေးသွားသည်ကို မြင်ရသည်။ သူက ကားကို တစ်နာရီမိုင်ငါးဆယ်နှုန်း အရှိန်မြှင့်မောင်းလိုက်သည်။ သို့သော် ခြေသုံးချောင်းနှင့် ကြက်က ကားဘေးတွင် အရှိန်မပျက် လိုက်ပါလာသည်။ တစ်မိုင်လေ...
Visits : 5783
1 -6of (7) records